Olee otú Mepụta 3D Carousel Flash Gallery na Music l
> Resource> Video> Olee otú Mepụta 3D Carousel Flash Gallery na Music
The flash carousel nkuzi-egosi na ị otú ike 3D carousel flash gallery na Wondershare Flash Gallery Factory, nke na-enye ụfọdụ pụtara free 3D flash gallery ndebiri. Mgbe e kere eke, ị nwere ike mfe ịkọrọ ya na website, myspace, Blogger, wdg
Nke a 3D flash gallery eme software na-ahapụ gị ngwa ngwa na-eme 3D foto mgbukepụ na ala, na-enyere gị ịzọpụta gị flash dị ka HTML, SWF, exe, XML na ndị ọzọ, nke i nwere ike iji na gị blog na weebụsaịtị.
1 Import foto flash carousel software
Na-agba ọsọ na 3D carousel software. Akpa họrọ ọnọdụ na mgbe ahụ usoro ihe omume ga-aga "ịchọgharị" taabụ ndabara. Pịa "Tinye foto" Mee na-button ịgbakwunye gị foto ma ọ bụ dị nnọọ ịdọrọ họrọ oyiyi na-storyboard ozugbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye ndabere music, biko pịa "Tinye Music" button ịgbakwunye ya.
2 Họrọ a 3D carousel flash template
Gaa Template Tab, ma họrọ "3D Theme", mgbe ahụ, ị ga-ahụ 3D carousel template n'etiti ndị a 25+ free 3D flash gallery ndebiri.
3 Asuanetop na-azọpụta gị 3D carousel flash gallery
The 3D carousel software na-enye dị iche iche mmepụta formats, otú i nwere ike ịzọpụta gị 3D carousel flash, ma ọ bụ bulite flash carousel ka sava weebụ, nakwa na ị na-enwe ike ịkọrọ ya on Facebook, Myspace, Twitter na ndị ọzọ.
Atụmatụ: Bulite 3D carousel flash na weebụsaịtị
Bulite kere SWF faịlụ ka ọ bụla weebụ Bochum na-enweta faịlụ si URL. Ọ bụrụ na ị na-adịghị onye web usu, ị nwere ike bulite gị SWF faịlụ ka Google Sites for free. Mgbe ahụ na-eso ya na Facebook, Myspace ma ọ bụ Twitter na otu-click mgbe ihe ịga nke ọma na-ebugote. E wezụga ndị na-elekọta mmadụ media weebụsaịtị, ị nwekwara ike idetuo na mado ndị na-esonụ HTML koodu na weebụ gị peeji ma ọ bụ Blogger, ogologo oge dị ka ọ na-akwado HTML koodu. Mgbe ahụ dochie SWF faịlụ adreesị ya ezigbo adreesị. I nwekwara ike ịgbanwe hà 3D flash site revising uhie ọnụ ọgụgụ "264" na "550".
<ihe ụdị = "ngwa / x-Shockwave-flash" allowScriptAccess = "mgbe" allowNetworking = "esịtidem" aha = "allowScriptAccess" uru = "mgbe" /> <param aha = "allowNetworking" uru = "esịtidem" /> <param aha = "nkiri" uru = "http://www.flash-slide-show.com/ oyiyi / Nkuzi / flash_banner / banner550.swf "/> <param aha =" àgwà "uru =" elu "/> </ ihe>
Mere! Ka anyị hụ anyị oké ọrụ. Dị nnọọ na-eso nzọụkwụ na-eme gị onwe gị 3D carousel flash gallery.
Kere site Wondershare Flash Gallery Factory
Cheta: Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara imeghe 3D carousel flash, biko ume gị nchọgharị ma ọ bụ na-eche obere ogologo.